GoCash Game Card $50 USD ~ ICT.com.mm
HomeGoCash Game Card $50 USD
GoCash Game Card $50 USD
GoCash Game Card (Global) founded in 2009, isaglobal micro-transaction portal website company. USD5 GoCash Game Card supports game types like MMO, FPS, Sports, Cars and Virtual World, the list of... [Learn more]
Brand: GoCashFilter by: Gaming Gift Cards, pcmm
GoCash Game Card (Global) founded in 2009, isaglobal micro-transaction portal website company. USD5 GoCash Game Card supports game types like MMO, FPS, Sports, Cars and Virtual World, the list of games are listed on their official website.
Activation Code ကို အီးမေးဖြင့်သာ ပို့ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ရုံးချိန်အတွင်း မှာယူပါက ၁၅-၃၀ မိနစ်ခန့်အတွင်း လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပြီး၊ ရုံးချိန် ပြင်ပတွင် မှာယူခဲ့ပါက ၁၂ နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ Payment confirmation အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။
Activation Code will be sent to your email address only. You may receive within 15-30 minutes during business hours or up to 12 hours upon successful payment confirmation.
USD $50 တန် GoCash Game Card ဖြစ်ပါတယ်။ GoCash Game Card က MMO, FPS, Sports, Cars နဲ့ Virtual World စတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ အားလုံးအတွက် Item တွေဝယ်ယူဖို့၊ ဇာတ်ကောင်တွေဝယ်ယူဖို့နဲ့ Level တွေမြှင့်ဖို့အတွက် ငွေပေးချေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Game ကတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားအားလုံးကို https://gocashgamecard.net/list မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
[GoCash Game Card အသုံးပြုနည်း]
1. GoCash တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဂိမ်းများအတွင်းမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ် မိမိကစားနေသည့် ဂိမ်းသို့ တိုက်ရိုက်သွားရောက်ပါ။
2. ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း Payment Method တွင် GoCash ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
3. မိမိ၏ PIN ကုဒ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Pickagame from GoCash Games or go directly to game portal.
Select GoCash as your payment method.
Enter your pin to complete the redemption.